'စကားပြောခွင့် ရှိတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ လက်နက်ကိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး'
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > အင်တာဗျူး > 'စကားပြောခွင့် ရှိတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ လက်နက်ကိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး'
'စကားပြောခွင့် ရှိတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ လက်နက်ကိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး'	ဖနိဒါ	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၅၃ မိနစ်	(တိုင်းမှူးအား လုပ်ကြံခဲ့သူ KIA မြို့ပြကွန်မန်ဒို လဖိုင်ဇော်ဆိုင်း နှင့် အင်တာဗျူး)ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၉၈၅ ခုနှစ်က မြစ်ကြီးနားမြိ့ အခြေစိုက် မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (မပခ) တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် လဇွမ် ခါန်ဖန် ဂေါက်ကွင်းမှ အပြန်တွင် ယာဉ်တန်းအား ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA ကွန်မန်ဒို အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင် လေးဦးက စီးနင်း တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွင် မပခ တိုင်းမှူး လဇွမ် ခွန်ဖန် နှင့် ကိုယ်ရေးအရာရှိတို့ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ် လဇွမ်ခွန်ဖန်မှာ အဆိုတော် L ခွန်းရီ၏ ဖခင်ဖြစ်သည်။ထိုလုပ်ကြံတိုက်ခိုက်မှုတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် KIA ကွန်မန်ဒို အထူးတပ်ဖွဲ့မှူး လဖိုင် ဇော်ဆိုင်း မှာ သေဒဏ်ချ မှတ်ခံခဲ့ရသည်။အကျဉ်းထောင်တွင်းတွင် ၂၇ နှစ်နီးပါး ကျခံခဲ့ရပြီးနောက် သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဖြင့် တနင်္လာနေ့ကမြင်းခြံထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သော အသက် ၄၉ နှစ် အရွယ်ရှိ ဦးလဖိုင်ဇော်ဆိုင်း ကို ထိုစဉ်က အဖြစ်အပျက်များနှင့် လက်ရှိအခြေအနေအပေါ် သဘောထားများကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် မဇ္ဈိမ သတင်းထောက်ဖနိဒါ က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။လွတ်မြောက်လာပြီး ကျန်းမာရေး အခြေအနေကော။ဖြေ။ ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကျနော် ခုချိန်ထိ ကျန်းမာရေး ကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရတာလဲ။ဖြေ။ ။ တိုင်းမှူး လဇွမ်ခွန်ဖန်ကို ကျနော် ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ အမှုကိစ္စကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ ဖြစ်တာက ၁၉၈၄ ခုနှစ် ကတည်းက သူတို့ အစိုးရရဲ့ မြောက်ပိုင်း ကွန်မန်ဒို ဆိုပြီး ပါဂျောင်၊ နဖော့၊ ဂျာပူ၊ ဂန်ဒေါင်ယန် တွေမှာ လေယာဉ်နဲ့ ပစ်ခတ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျနော်တို့ ဗဟိုဌာနချုပ်ကို အစိုးရတပ် အားနဲ့အင်နဲ့ ထိုးစစ် ဆင်ထားတယ်။ နောက်ပြီးမြောက်ပိုင်း ကွန်မန်ဒိုတွေကနေ ကျေးရွာတွေမှာ ဓါးမြတိုက်၊ သူတို့ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့က ကျနော်တို့ နယ်မြေတွေမှာ လုပ်ချင်တာလုပ်နေလို့ သူတို့ကို ကျနော်တို့ ပြန်တိုက်တဲ့ သဘောပဲ။အဲဒီအချိန်မှာ KIA ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မိုင် ဖွဲ့ထားတဲ့ SUG ဆိုတဲ့ Special Urban Guerilla (မြို့ပြ အထူးပြောက်ကျား တပ်)ဆိုတာ ရှိတယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ မြစ်ကြီးနား မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှာ ကျနော်တို့ ဝင်စီးတိုက်ခိုက်တာ။ အဲဒီမှာ သုံးပွင့် တဦးလည်း သေတယ်။ အားလုံး လက်နက် ထိမှန်တာ ငါးဦးလောက် ရှိတယ်။ မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူး လဇွမ် ခွန်ဖန်ပါတယ်။ ဒု-တိုင်းမှူး ကျော်သန်းပါတယ်။ တခြားလူတွေ နာမည် မမှတ်မိတော့ဘူး။ မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူး လဇွမ် ခွန်ဖန် ကလည်း ကချင်လူမျိုးတဦးပဲနော်။ဖြေ။ ။ ကျနော်က ကချင်အချင်းချင်းမို့လို့ ပစ်တာမဟုတ်ဘူး။ သူက အစိုးရဘက်က စစ်ဗိုလ်ဖြစ်လို့ပဲ။ သူ့သား ဦးထွယ်ဝါနဲ့ ကျနော် မန္တလေးထောင်မှာ ဆုံတယ်။ သူ့သားကလည်း ကျနော့်အပေါ် နားလည်တယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ အငြိုးကြီးတွေ မရှိဘူး။ တိုင်းမှူး ခွန်ဖန်က အဲဒီအချိန်မှာ မဆလ စစ်ဗိုလ်ကြီးပဲ။ ဗမာ၊ ကချင် ဆိုပြီး ခွဲခြားလို့ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ နယ်မြေမှာ လာတိုက်နေတဲ့လူတွေကို ကျနော်တို့ဘက်က ပြန်ပြီး တိုက်ခိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဦးဇော်ဆိုင်းတို့ဘက်က ဘယ်နှစ်ဦး ပါဝင်တိုက်ခိုက်တာလဲ။ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ လေးယောက်ပါပဲ။ ကျနော်တို့ဘက်က
မြောက်ပိုင်းကွန်မန်ဒိုတွေကနေ ကျေးရွာတွေမှာ ဓါးမြတိုက်၊ သူတို့ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့က ကျနော်တို့ နယ်မြေတွေမှာ လုပ်ချင်တာလုပ်နေလို့ သူတို့ကို ကျနော်တို့ပြန်တိုက်တဲ့ သဘောပဲ။
ပြောမယ်ဆိုရင် operation (စစ်ဆင်ရေး) ဝင်တာပဲ။ သူတို့ ဘက်က ပြောရင်တော့ လုပ်ကြံတယ်လို့ ပြောမှာပေါ့။ ကျနော်တို့ ပြောမယ်ဆိုရင် စီးနင်းတိုက်ခိုက်တာပါ။ တိုင်းမှူးတို့က ကားသုံးစီးနဲ့ ဂေါက်ရိုက်ပြီး တိုင်းဌာနချုပ် အပြန် လမ်းမှာ စောင့်ပစ်လိုက်တာ။ ရှေ့ကားက escort(အစောင့်အကြပ်)၊ အလယ်ကားက တိုင်းမှူး၊နောက်ဆုံးကားက ဒု-တိုင်းမှူးပါတာ။ကျနော်တို့က အရပ်သား ဈေးသည် ပုံစံဟန်ဆောင်တယ်။ မြို့လယ်မှာ ဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ အရပ်ဝတ်နဲ့ လှမ်းပစ်လိုက် တာ။ ပုဆိုးက ကချင်ပုဆိုးဝတ်ထားတယ်။ခြင်းတောင်းထဲမှာ AK 22 သေနတ် ဖွက်ထားတယ်။ ယဉ်တန်းလာမယ့်နေရာမှာ ညနေ မိုးချုပ်ခါနီး ၆ နာရီ ၃ မိနစ်ချိန်မှာ အဲဒီကားလမ်းကို ကျနော်တို့ တက်လာတာ မမြင်နိုင်တဲ့အချိန် သူတို့ ရောက်ခါနီးမှာ အဲဒီနေရာမှာ အသင့်နေရာယူထားပြီ။အဲဒီကားလမ်းနဘေးမှာ မီးကင်းရှိတယ်။ မီးကင်းကနေ တချို့ထွက်လာတယ်။ တချို့က ကုက္ကိူပင် အနောက်ကနေ ထွက်လာပြီး ပထမဆုံး ပစ်လိုက်တာ။ နောက်တော့ အချင်းချင်း ပစ်ခတ်ကြတယ်။ တကယ့် Profesional လိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်ချက်ကြောင့် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လုပ်တဲ့သဘောပါ။ကျနော်တို့ထဲက သုံးယောက်က လွတ်မြောက်သွားတယ်။ ကျနော်က ကျနော့် သူငယ်ချင်းကို ပြန်လိုက်ရှာရင်း ဖမ်းခံရ တာ။ ကျနော်တို့ အချင်းချင်း ပြန်ရှာတဲ့အချိန်မှာ ဖမ်းဆီးခံရတာပါ။ ကျနော်က အဲဒီအချိန် အသက် ၂၂ နှစ်ပါ။ ၁ဝ တန်း အပြင်ဖြေနေရင်း တာဝန်ထမ်းဆောင် အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ ကချင်တွေက အဲဒီအချိန် ကတည်း ကနေ ဒီနေ့ထိ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကို ထမ်းဆောင်နေကြတာပဲ။ ဘယ်လို ပုဒ်မတွေနဲ့ ကျခံရတာလဲ။ဖြေ။ ။ ပုဒ်မကတော့ ၁၇(၁)၊ ၁၇(၂)၊ ၁၉(စ)၊ ၃ဝ၂ အပိုဒ် ၁/၃၄ တွေနဲ့ သေဒဏ်နဲ့ ၂၄ နှစ် ကျခံရတာပါ။ အဲဒီနောက် ၄/၈၉ အရ တသက်တကျွန်း ပြောင်းလိုက်တယ်။ အကျဉ်း ထောင်ထဲမှာ ၂၆ နှစ်နဲ့ ၁ဝ လ နေခဲ့တယ်။ လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ၂၇ နှစ် ပြည့်မယ်။ ကိုဇော်ဆိုင်းအနေနဲ့ တကယ်ပဲ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ယူဆလား။ဖြေ။ ။ ကျနော်အနေနဲ့တော့ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတော့တောက်လျှောက် ဖြစ်နေတာပဲ။ အခုလည်း ဖြစ်နေသလိုပါပဲ။ ပြည်နယ်ရဲ့ အရေးပေါ့ဗျာ။ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ၁၉၄၇ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်း၊ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆုံးရှုံးတဲ့ အခွင့်အရေး ပတ်သက်လို့ စကားပြောခွင့် ရမလာတဲ့အခါကျတော့ လက်နက်ကိုင်ပြီးမှတော်လှန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲတော့ စကားပြောခွင့် ရှိတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ လက်နက်ကိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့် မရတဲ့အခါမှာ လက်နက်ကိုင်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။အမှန်တကယ် မြောက်ပိုင်း တိုင်းမှူးကို ပစ်သတ်ခဲ့
ကျနော်တို့ရဲ့ ဆုံးရှုံးတဲ့ အခွင့်အရေး ပတ်သက် လို့ စကားပြောခွင့် ရမလာတဲ့အခါကျတော့ လက်နက်ကိုင်ပြီးမှ တော်လှန်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ စကားပြောခွင့် ရှိတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ လက်နက်ကိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ခွင့် မရတဲ့အခါမှာ လက်နက်ကိုင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။
တာလား။ဖြေ။ ။ တကယ်ဖြစ်ခဲ့လို့လဲ တကယ့် ကျနော်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ ကျနော် ဝန်ခံခဲ့ပြီးပါပြီ။ တကယ်ပစ်ခဲ့တာပါ။၂၆ နှစ်ကျော် အကျဉ်းထောင်မှာ နေခဲ့ရပြီးနောက်ပြန်လွတ် လာတော့ ဦးဇော်ဆိုင်း အနေနဲ့ ဘယ်လို ခံစားရလဲ။ဖြေ။ ။ သိပ်ထူးခြားမှုတော့ မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သာမန်အကျဉ်းသားတွေလို လျှော့ရက် ခံစားခွင့် ရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ နှစ်လောက်ကတည်းက လွှတ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ခုတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေး သမားတွေအနေနဲ့ ခုမှ လွတ်လာရတဲ့ အနေအထားမျိုးပါ။ သာမန်ဆိုရင်တောင်မှ လွတ်ရမယ့် အနေအထားကိုရောက်နေပါပြီ။ ဦးဇော်ဆိုင်းအနေနဲ့ ခု ဘာတွေ ဆက်လုပ်မှာလဲ။ဖြေ။ ။ လောလောဆယ်ကတော့ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့အတွက် ကျနော် ဒီမှာ ရန်ကုန်ဆင်း လာတာလည်း အဲဒါပါပဲ။ အဖြေတခုတော့ ကျနော် ကြိုးစားနေတဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ပြည်နယ်မှာ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှာ ဒီမှာ ရှိနေတဲ့ ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေကို အကြံဉာဏ် လာတောင်းတာလည်း ဖြစ်တယ်။ နောက် တကယ်ခံစားနေရတဲ့ ကျနော်တို့ ဒေသ အကြောင်းကို အခု စကားပြောလို့ ရတဲ့ခေတ်မှာ ပြောဆိုချင်နေတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ ကျနော်တို့ တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်ပါတယ်။ KIA မှာ ဆက်ပြီး အမှုထမ်းဆောင်မှာလားရှင်။ဖြေ။ ။ အဲဒီသဘောထားက ကျနော့်မှာ ဘာမှ မရှိသေးပါဘူး။ KIA မှာ အရင်က ဘာတာဝန်ယူခဲ့လဲ။ဖြေ။ ။ ဗဟိုက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အထူးကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့မှာ အထူးကွန်မန်ဒိုအနေနဲ့ မြို့မှာ တိုက်ရတဲ့ သဘောပါပဲ။KIA အထူးကွန်မန်ဒိုတဦး ဖြစ်ခဲ့တော့ ဘယ်လို တိုက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တာလဲ။ဖြေ။ ။ တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံကတော့ ဒီမြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ် အစိုးရ ၃၇ တပ်စခန်းအဝင် မိုင်ဒေးကွေ့မှာ ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲက ပထမဦးဆုံးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုဇော်ဆိုင်းနဲ့အတူ တခြား ဘယ်သူတွေ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရလဲ။ဖြေ။ ။ ကျနော် တဦးထဲပါ။ ကျနော့် အမှုတွဲတွေကတော့ ကျနော့်ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းတွေ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေပါပဲ။ သူတို့တွေရော လွတ်မြောက်လာပြီလား။ဖြေ။ ။ သူတို့တွေက ၁၇(၁)နဲ့ ဖမ်းတယ်။ နှစ်နှစ်နဲ့ ၁ဝ လလောက် ကျခံပြီးတော့ ပြန်လွတ်သွားကြပါပြီ။ထောင် ဘယ်နှစ်ခုလောက် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရလဲ။
၁၉၉ဝနဲ့ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်ကြားမှာတော့ တော်တော်ခက်ခဲတယ်။ အဲဒီတုန်းက အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အမျိုးမျိုး ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုကို ခံခဲ့ရပါ တယ်။ အထူးခြားဆုံးက NLD ကို အာဏာမလွှဲ ဘဲနဲ့ စစ်တပ်က ဆက်ကိုင်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ ထောင်ထဲမှာ နေရထိုင်ရတာ ခက်ခဲလာတယ်။
ဖြေ။ ။ မြစ်ကြီးနားထောင်၊ တရားစီရင်တာ မန္တလေးထောင်နဲ့ ခု မြင်းခြံထောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းခြံထောင်က ထူးခြားတဲ့ အခက်အခဲ၊ ထောင်တွင်း အတွေ့အကြုံတွေ ပြောပြပေးပါလား။ဖြေ။ ။ ၁၉၉ဝနဲ့ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်ကြားမှာတော့ တော်တော်ခက်ခဲတယ်။ အဲဒီတုန်းက အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အမျိုးမျိုး ဖိနှိပ် ညှဉ်းပန်းမှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးက NLD ကို အာဏာမလွှဲဘဲနဲ့ စစ်တပ်က ဆက်ကိုင်တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ ထောင်ထဲမှာ နေရထိုင်ရတာ ခက်ခဲလာတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင် အများကြီးပေါ့ဗျာ။ အထူးသဖြင့် ရက်ထူး ရက်မြတ်တွေဖြစ်တဲ့ ခရစ္စမတ်ရက်၊ နှစ်သစ်ကူး၊ အာဇာနည်နေ့၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့တွေမှာ ကျနော်တို့ တတိုက်လုံးကို ရိုက်နှိက်ညှဉ်းဆဲခံရတာတွေ ရှိတယ်။ ထောင်ထဲမှာရှိနေတုန်း ထောင်ဝင်စာရော ပုံမှန်ရခဲ့လား။ဖြေ။ ။ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တနှစ်မှာ တကြိမ်ပေါ့ဗျာ။
We have 192 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved